Uyisebenzisa njani i-Uber kwaye ufumane i-5 euros kuhambo lwakho lokuqala | Iindaba zeGajethi
Into enokubonakala ilula kakhulu kubasebenzisi abakhutheleyo bale nkonzo, inokuba yintloko kwabo bangasetyenziswanga ukusebenzisa olu hlobo lothutho. Ukushiya ecaleni impikiswano ukuze ukhethe enye okanye enye indlela yothutho, usebenzisa u-Uber ilula kwaye iyakhawuleza Kodwa kubalulekile ukuthatha amanyathelo afanelekileyo okwenza oko.
Kule meko siza kubona inyathelo ngenyathelo ukuba njani Sebenzisa u-Uber kwisixhobo sethu. Ngokwenyani into ebalulekileyo kukuba ilula kwaye inkampani inesicelo esithile esivumela ukuba sisebenzise ezi ndlela zothutho ngamanyathelo ambalwa alula. Ke kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba uyasebenza esixekweni sethu okanye kuyacetyiswa ukuba uthelekise amaxabiso kunye nezinye iindlela zothutho ezikhoyo.
Sithi ngokuthelekisa ixabiso ngeendlela ezahlukeneyo zothutho ngamava obuqu esixekweni apho ixabiso le-Uber lokusisa kwenye indawo liye kwelinye lalifana ncam nelo leTeksi okanye nokuba lingaphezulu nje kancinci kunexabiso indlela efanayo ngeMetro. Kodwa njengoko sisithi oku akunjalo kuzo zonke iimeko kwaye nangona kuyinyani ingcebiso kukuphonononga amaxabiso ngaphambi kokuqesha, kufuneka sithathele ingqalelo ezinye izinto. Ngale nto ithethwayo masiqale kwasekuqaleni ngokuziqhelanisa kwaye masibone ukuba uyisebenzisa kanjani i-Uber.
1 Khuphela usetyenziso kwi-smartphone yethu inyathelo lokuqala
2 Yenza iakhawunti yakho ukuqesha i-Uber
3 Ukuhlawulela ukukhwela kwi-Uber
4 Chaza indawo oya kuyo kwi-Uber uze ubale indlela
5 Uxolo lwengqondo kunye nokukhuseleka kunye no-Uber
Khuphela usetyenziso kwi-smartphone yethu inyathelo lokuqala
Ngaphandle kweapp, singasebenzisa iwebhusayithi yeUber, nangona into esiya kuthi sigqibe ukuyisebenzisa ngakumbi sisicelo se-Uber uqobo. Kule meko, into ebalulekileyo kukuba sinokukhetha kuwo onke amaqonga akhoyo kunye ne-OS ngenxa yoko asiyi kuba nangxaki yokuyifaka kwi-smartphone yethu. Izicelo zisimahla kwaye sizishiya kanye apha xa ufuna khuphela ngoku kwi-iPhone yakho okanye kwisixhobo se-Android:
Umthuthukisi: Ungathenga okanye uthengise izabelo Uber Technologies, Inc.
Yenza iakhawunti yakho ukuqesha i-Uber
Ngoku inyathelo elilandelayo kukwenza iakhawunti yethu ukuze sikwazi ukusebenzisa usetyenziso kunye nenkonzo ngokubanzi.
Ngaba uyafuna isaphulelo se- € 5 kuhambo lwakho lokuqala? Faka ikhowudi yna8x8 kwi-Uber app okanye bhalisa ngale khonkco kwaye ungalivuyela elaa tyala kuhambo lwakho lokuqala.
Kule meko kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba idatha yakho iyimfuneko ukuze ukwazi ukusebenzisa inkonzo yezothutho kwaye ngenxa yoko kufuneka songeze inombolo yefowuni, sibhalise i-imeyile, samkele imigaqo kunye neemeko kwaye ekugqibeleni wenze isitshixo eya kuba yeyonanto ekufuneka siyifakile xa singena, ke kubalulekile ukuba kube nzima kodwa siyikhumbule kwixesha elizayo. Ukongeza, enye inketho kukubhalisa kwiakhawunti yenethiwekhi yoluntu njenge-Facebook okanye uGoogle.
Okokuqala siya kwamkela ukuba iapp iyangena kwindawo yethu ukwazi ukwazi ngalo lonke ixesha ukuba siphi kwaye umqhubi ukude kangakanani. Emva koko siya kwamkela ukuthunyelwa kwezaziso kwaye silandele amanyathelo okwenza i-akhawunti yethu.
Nje ukuba ubhaliso lugqityiwe Siza kufumana iSMS kule nombolo yefowuni siyibhalisileyo Ukuqinisekisa iakhawunti kwaye emva koko siqale ukusebenzisa inkonzo. Lo myalezo uya kuthunyelwa ngalo lonke ixesha siphuma kwi-smartphone, ke sicebisa ukuba singaphumi ngqo kwaye ke siphephe ukusebenzisa le khowudi kuhambo ngalunye.
Ukuhlawulela ukukhwela kwi-Uber
Kubhaliso losetyenziso lusivumela ukuba sikhethe phakathi kwendlela yokuhlawula ngemali kumqhubi omnye, sinokongeza ikhadi lethu letyala okanye lokuthenga okanye sinokusebenzisa iPayPal. Iindlela zokuhlawula zihambela phambili kwaye kwamanye amazwe kunokwenzeka ukuba usebenzise iApple Pay phakathi kwezinye iindlela zokuhlawula ezifanayo, ke ngekhe sibe nangxaki ngayo.
Singayitshintsha indlela yokuhlawula nanini na Ukusuka kwi-app ngokwayo okanye ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi ka-Uber, ke ungazikhathazi ngayo kuba kulula ukwenza utshintsho xa sicela inkonzo.
Ngoku ekubeni yonke into ibhalisiwe kwaye ilungile ngeakhawunti yethu, ipassword kunye nenombolo yefowuni eyongezwe ku-Uber, singaqala ukusebenzisa inkonzo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye nakwesiphi na isixeko abasebenza kuso. Into ebalulekileyo xa sele ubhalisile kunye nezinye iinkcukacha njengoko besitsho ku-Uber: "Yonwabela ukukhwela"
Chaza indawo oya kuyo kwi-Uber uze ubale indlela
Singalazi ixabiso lohambo ngaphambi kokuliqesha, ke sinika izimvo ngokujonga ixabiso okanye ngokuthelekisa nezinye iindlela zothutho esixekweni. Ngayiphi na imeko, okubalulekileyo kukuba ngoku sinokukhetha indawo esiya kuyo ngokungena kuyo kwibhokisi ethi Uyaphi?. Kungenzeka ukuba usuke kwindawo ekhethwe ngexesha loku-odola i-Uber kodwa akukho nto yenzekayo, sinokuyiguqula indawo yethu ngaphambi kokuqinisekisa ukuthuthwa ngokuchofoza kwibhokisi eya kuyo.
Kuhambo olulandelayo akuyi kufuneka siphinde singene kwidilesi yendawo esihlala kuyo ukuba sihlala sisebenzisa i-app kuba igcinwe njengezindlela ezimfutshane njengoko usebenzisa isicelo. Ukongeza, kwezinye iidolophu kuvunyelwe ukucela uhambo ngohambo lokuthatha abahlobo bethu, usapho okanye nabani na oza kuza nawe kwi-Uber efanayo. Xa ucela ukukhwela, usetyenziso luzakuphakamisa indawo efanelekileyo oza kudibana nayo nomqhubi.
Uxolo lwengqondo kunye nokukhuseleka kunye no-Uber
Singangena kwi-Uber nge-extrovert okanye i-introvert driver, kodwa into u-Uber asiqinisekisa ngayo kukuba ukhuseleko lwethu yeyona nto iphambili kwezothutho, ke sele benendlela zabo zokukhetha abaqhubi kunye neinshurensi yokuhamba. naluphi na uhlobo. Kukho nokubakho kokubeka iliso kuhambo ukusuka kwi-app ngokwayo kwaye uhlale unxibelelana ngalo lonke ixesha noxolo lwengqondo kumalungu osapho lwethu.
Kwimeko nayiphi na into, ukulula ekusebenziseni kwayo kunye nexabiso elihlengahlengisiweyo yintoni eyenza le nsiza inomdla ukuhamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye kwisixeko. Jonga indawo yomqhubi ngexesha lokwenyani ukubona ukuba kungathatha ixesha elingakanani ukuqokelela kuthi ngendlela eqikelelweyo okanye idatha enje ngemodeli, umbala, ipleyiti yelayisensi kunye nenqaku lomqhubi / lomthengi kwi-app ngokwayo yenza oku kube yinto enomdla ngokwenene indlela yokujikeleza isixeko. Ubulumko bubalulekile kule meko kwaye jonga kwiinkcukacha ze-Uber ekhethwe njengombala wemoto okanye ipleyiti yelayisensi ngaphambi kokukhwela Kubalulekile
Eminye ilula ngokulula Singavavanya umqhubi kunye nohambo olwenziweyo kwi-app ngokwayo xa ukhenketho lugqityiwe. Oku kubalulekile kuba kamva abanye abasebenzisi baya kuba nobungqina bayo kunye nayo umqhubi uya kuvavanya indlela esiziphethe ngayo ngaphakathi kwesithuthi kunye neapp uqobo, ke kungcono ukuba uziphathe kakuhle kwaye wonwabele uhambo ukuze abanye abaqhubi bangabi nankxalabo ngokuza kusithatha xa sifuna.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyisebenzisa njani i-Uber